Qoor-Qoor iyo xubnaha lagu qasbay in uu ku daro guddiga doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Qoor-Qoor iyo xubnaha lagu qasbay in uu ku daro guddiga doorashada
Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoor-Qoor ayaa dib usoo celiyay qaar kamida xubnihii cabashada laga keenay ee Guddiga doorashooyinka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Qoor-Qoor ayaa dib usoo celiyay qaar kamid ah xubnihii ku jiray guddiga doorashooyinka ee cabashada laga keenay.
Qoor-Qoor ayaa 11 kamid ah xubnihii guddiga doorashada ee Galmudug ku matali lahaa doorashada guud ee dalka waxa uu ku soo celiyay 7 kamid ah kuwii ay cabashada ka keeneen golihii Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya.
Guddi loo xil saaray tabashada xubnaha mucaaradka ayaa waxay soo celiyeen 4 xubnood oo kamida 11 kii cabashada laga qabay.
Shaqsiga ugu weyn ee xubnaha doodda laga keenay waa Maxamed Daahir oo loo wado guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Galmudug, kaasoo guddigii loo xil saaray turxaan-bixinta xubnihii cabashada laga keenay ay sheegeen in lagu waayay wax qalad ah, iyadoo ay xusid mudan tahay in madaxweyne Farmaajo uu si gaara u dalbaday in la soo celiyo shakhsigan oo sida la sheegay ku hayb ah hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Shaqsiga labaad ee isna kamid ah kuwa uu kusoo diray liiska xubnaha guddiga doorashooyinka Agaasimaha Hay'adda NISA Fahad Yaasiin waa Maxamed Qaasim.
Sida ay Keydmedia Online ogaatay, Maxamed, waxaa la rumeysanyahay in uu uu kaga mid noqday xubnaha guddiga doorashooyinka talada Fahad Yaasiin, sidoo kalena waxaa damiintay oo ka gaday Fahad Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda Mahdi Guuleed oo saaxiib dhaw la ah Guddoomiyaha Machadka cilmi baarista ee RAAS Dr.Abiib, iyadoo Maxamed Qaasimna uu yahay guddoomiye ku xigeenka machadka RAAS.
Kooxda ololaha Farmaajo ayaa ux usul duubeysay tan iyo markii uu soo ifbaxay muranka guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed in aan marnaba la reebin magacyada labada ruux ee uu aaminsan yahay Agaasimaha hay'adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin.
Hada, waxay u muuqataa in ay ku guuleysteen oo loo soo daayay labada qof ee uu door biday Farmaajo.
Qoor-Qoor oo isku dayay inuu ka biya-diido soo jeedinta Fahad iyo Farmaajo in ay mar kale talo ku yeeshaa xubnaha guddiga doorashooyinka Galmudug ayaa ugu dambeyn aqbalay dalabka kaga yimid saaxiibadii, inkastoo caga-jiid dheer kaddib uu aqbalay in uu soo gudbiyo liiska magacyada xubnaha guddiga isagoo ka tala galiyay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday.